Warbixinta hawlaha caalamiga ee MSF - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Warbixinta hawlaha caalamiga ee MSF
Warbixinta hawlaha caalamiga ah ee 2009- Khulaasayn
Sanadkii 2009, MSF waxay u fidisay kaalmo cafimaad oo madax banan dadka ay wax yeeleyeen dagaalada, cudrada , musiibooyin iyo qalalasooyin kale oo kunool in kabadan 65 wadan oo duniada dhacaladeeda kukalayaalo.
Warbixnta ayaa waxa eey muujinaysaa in kooxda MSF waxayaabahii ay qabatatay amba bixisay oo ay kamid ahaayeen.
In kabadan 7.5 malayiin la-talin caafimaad (consultations)
In kabadan 49,600 qaliin
Dawayn in kabadan 154,000 caruur oo nafaqo dari ay hayso
Intaas waxa sii dheer in MSF ay si joogto ah u raadineyso qababka oo haboon oo ay kufidin karto daryeel caafimaad oo tayo sare leh si ay ooladagaalanto cudurada oogu dilaasan dunida. Sanadkii 2008-da MSF waxa ay.
Kadaweyay in kabadan 130,200 qof cudurka daacuunka,
U fidisay daryeel in kabadan 190,000 qof oo qabo HIV/AIDS siiseyna dawada looqaato cudurka HIV/AIDS oo loo yaqaano antiretroviral in kabadan 162,000 oo qof
Qaabishay amba laseexiyay cusbitaaladeeda in kabadan 1,900 bukaan oo qabo cudurka Human African tyrpanosomiasis amba Jirada huradada ( sleeping sickness) infection kadhasho parasitka oo kubadan afrikada sahara kahooseysa.
Ka daweysay in kabadan 1,80 oo qof cudurka loo yaqaano leishmaniasis oo ah cudur uu keeno prasiteka oo lagahelo wadamada Bangladesh, Brazil, India , Nepal iyo Sudan. Hadii aan ladawayn nooca ba’an ee loo yaqan Visceral leishmaniasis (or Kala azar, ) ayaa ah mid marwalobo halis ah.
Ka daweysay in kabadan 1.25 milyan oo dad ah cudurka duumada amba malaariyada kaas oo sababi karo qalal,suuxdin amba miyir badoolmid, iyo walibo dhimasho hadii aan ladawayn
Ka daweysay in kabadan 78,000 qof cudurka meningitis ,kanatalaashay 706,000 qof cudurkan oo ah mid laiskugudbiyo amba laiskudaarto ,sababi karana dhimasho.
Ka daweysay in kabadan 29,000 oo qof cudurka qaaxada oo ay kamid yihiin 971 qabo nooca dawooyinka laqabsado oo looyaqaano Multible-drug-resistant (MDR). Sanad walbo sagaal malyan oo qof ayay kudhacdaa qaaxada kuwaas oo kudhowaad laba milyan oo kamid ahi u dhintaan
MSF ayaa waxaa kale oo ay wadaa olole ay oogujirto sidii loo hormarinlahaa helintanka dawooyinka iyo maalgalin cilmibaarid lagubaarayo sidii dawooyin loog heli lahaa cudurada laiska hilmaamay. Akhri akhbaar maaliyeed ee 2009
Halkan ka akhri war-bixinta caalmiga ee MSF oo dhamaystiran(Af-ingriis )